Famakiana Baiboly isan'andro Androany 24 Oktobra 2018 | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Drafitra famakiana Baiboly Famakiana Baiboly isan'andro Androany 24 Oktobra 2018
Famakiana Baiboly isan'andro Androany 24 Oktobra 2018
Ny famakiana Baiboly ataontsika isan'andro dia avy amin'ny bokin'ny 2 Tantara 11: 1-23, ary 2 Tantara 12: 1-16. Vakio sy ho voatahy.
2 Tantara 11: 1-23:
1 Ary rehefa tonga tany Jerosalema Rehoboama, dia novoriny ny taranak'i Joda sy Benjamina, valo alina amby iray hetsy, voafantina hiady amin'ny Isiraely, hamerenany ny fanjakana amin'i Rehoboama. 2 Fa ny tenin'ny Tompo tonga tamin'i Semaia, lehilahin'Andriamanitra, nanao hoe: 3 Mitenena amin'i Rehoboama, zanak'i Solomona, mpanjakan'ny Joda, sy amin'ny Isiraely rehetra any Joda sy Benjamina, hoe: 4 Izao no lazain'ny Tompo: miakara, ary aza miady amin'ny rahalahinareo; samia mody any an-tranony avy, fa avy amiko izao zavatra izao. Nankatò ny tenin 'ny Tompo izy ireo ary niverina tsy hanafika an' i Jeroboama. 5 Ary Rehoboama nitoetra tany Jerosalema ka nanamboatra tanàna mimanda tany Joda. 6 Nanorina an'i Betlehema sy Etam ary Tekoa izy, 7 sy Bet-zur, sy Soko ary Adullam, 8 sy Gat, Maresa, Zifa, 9 Adoraim, Lachis, Azeka, 10 Zora, Aijalon , ary Hebrona, izay ao amin'ny Joda sy Benjamina dia tanàna mimanda. 11 Ary nohamafisiny ny fitoerana mimanda, dia nasiany mpifehy ary fitehirizam-bokatra sy diloilo ary divay. 12 Ary tamin'ny isam-bohitra dia nasiany ampinga sy lefona avokoa, sady nohamafiny dia nohamafisiny avokoa ny fananan'i Joda sy ny Benjamina. 13 Ary ny mpisorona sy ny Levita izay teo amin'ny Isiraely rehetra dia nankeo aminy avy tany amin'ny taniny rehetra. 14 Fa ny Levita nandao ny tany manodidina azy sy ny taniny, dia tonga tany Joda sy Jerosalema; fa Jeroboama sy ny zanany nandroaka azy tsy hanao ny asan'ny mpisorona ho an'ny Tompo. 15 Ary nanendry azy ho mpisorona amin'ny fitoerana avo sy ho an'ny ny demony sy ny zanak'omby izay nataony. 16 Ary rehefa afaka izany, dia avy tany amin'ny firenen'Isiraely rehetra izay nanomana ny fony hitady an'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, no tonga tany Jerosalema hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah, Andriamanitry ny razany. 17 Dia nampahery ny fanjakan'ny Joda izy ka nampahatanjaka an-dRehoboama, zanak'i Solomona, telo taona; fa tamin'ny lalan'i Davida sy Solomona no niarahany telo taona. 18 Ary Rehoboama naka an'i Mahata, zanakavavin'i Jerimota, zanak'i Davida, ary Abihail, zanakavavin'i Eliaba, zanak'i Jese; 19 izay niteraka azy; Jeush, Syamaria, Zaham. 20 Ary nanarakaraka azy dia naka an'i Maaka, zanakavavin'i Absaloma izy; izay niteraka an'i Abia sy Atahy sy Ziza ary Selomita. 21 Ary Rehoboama tia an'i Maaka, zanakavavin'i Absaloma, mihoatra noho ny vadiny rehetra sy ny vaditsindranony ((fa naka vady valo ambin'ny folo sy vaditsindrano-polo izy) ary niteraka zazalahy valo amby roa-polo sy zazavavy enim-polo. lehibeny ho mpanapaka ny rahalahiny, satria nataony ho mpanjaka ihany. 22 Ary hendry izy ka nampiely ny zanany eran'ny tanin'i Joda sy Benjamina rehetra, tamin'ny tanàna mimanda rehetra, ka nomeny hanina betsaka. Ary naniry vady maro izy.
2 Tantara 12: 1-16:
1 Ary nony efa nampiorina ny fanjakana Rehoboama, dia nampahery azy, dia nahafoy ny lalàn'ny Tompo izy sy ny Isiraely rehetra. 2 Ary tamin'ny taona fahadimy nanjakan'i Rehoboama mpanjaka dia niakatra Sisaka, mpanjakan'i Egypta, hamely an'i Jerosalema, satria nivadika tamin'i Jehovah izy, 3 tamin'ny kalesy roapolo sy mpitaingin-tsoavaly enina alina; ary tsy hita isa ny vahoaka. dia nivoaka avy tany Egypta izy; ny Lubim, ny Sukkiima, ary ny Etiopiana. 4 Ary naka ny tanàna mimanda any Joda izy ka tonga tany Jerosalema. 5 Dia tonga tany amin'i Rehoboama sy ny andrianan'ny Joda, izay nivory tany Jerosalema i Semaia mpaminany, ary hoy izy taminy: Izao no lazain'ny Tompo: nahafoy ahy ianareo, ka dia nandao anareo koa aho ny tanan'i Sisaka. 6 Ary ny andrianan'ny Isiraely sy ny mpanjaka nanetry tena; ary hoy ireo: Marina ny Tompo. 7 Ary nony hitan'ny Tompo fa nanetry tena izy, dia tonga tamin'i Semaia ny tenin'ny Tompo nanao hoe: Nanetry tena izy ireo; koa tsy handringana azy Aho, fa homeko famonjena; ary ny fahatezerako tsy aidina amin'i Jerosalema amin'ny tanan'i Sisaka. 8 Nefa ho tonga mpanompony izy; mba hahafantaran'izy ireo ny fanompoana sy ny fanompoana ny fanjakana amin'ny tany. 9 Ary Sisaka, mpanjakan'i Egypta, niakatra hamely an'i Jerosalema ka nahafaka ny rakitra tao an-tranon'i Jehovah sy ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka; azony avokoa izy rehetra, nesoriny ny ampinga volamena izay nataon'i Solomona. 10 Ary Rehoboama mpanjaka dia nanao ampinga varahina ka natolony ho eo an-tànan'ny lehiben'ny mpiambina, izay niambina ny fidirana amin'ny tranon'ny mpanjaka. 11 Ary nony niditra tao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka, dia tonga ny mpiambina ka naka azy, ary naveriny indray tao amin'ny efitrano fiambenana. 12 Ary raha nanetry tena izy, dia niodina taminy ny fahatezeran'i Jehovah, ka tsy handringana azy tanteraka izy; 13 Ary Rehoboama mpanjaka dia nitombo tany Jerosalema, ary nanjaka; fa Rehoboama iray amby efapolo taona fony nanomboka nanjaka, ary fito ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema, ilay tanàna nofidin'ny Tompo tamin'ny firenen'Isiraely rehetra, apetraho eo ny anarany. Ary ny anaran-dreniny dia Naama Amonita. 14 Ary nanao ratsy izy, satria tsy nanomana ny fony hitady an'ny Tompo. 15 Ary ny tantaran-dRehoboama, na ny voalohany na ny farany, tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'i Semaia mpaminany sy Ido mpahita ny amin'ny firazanana va? Ary dia niady foana Rehoboama sy Jeroboama. 16 Ary Rehoboama lasa nodi-mandry any amin'ny razany, dia nalevina tao an-Tanànan'i Davida; ary Abia zanany no nanjaka nandimby azy.
Previous lahatsoratraFamakiana Baiboly isan'andro 23 Oktobra 2018.
Next lahatsoratraFamakiana Baiboly isan'andro Androany 25 Oktobra 2018.
Andinin-teny momba ny reny
Teboka am-bavaka amin'ny fiandrasana ny tompony